Abavelisi beengxowa ze-Canvas Tote, abaxhasi-i-China Canvas Tote Bag Factory
Uninzi lwabantu luyazi ukuba umqhaphu yenye yezona zinto zindala kumashumi eminyaka. Ke ngoko, kuthathelwa ingqalelo imeko yokhuselo lokusingqongileyo ngomqhaphu, umqhaphu yeyona nto ibalulekileyo yokwenza iibhegi xa kuthelekiswa neplastiki.
Iingxowa ze-Canvas zingahlulwa zibe ziindidi ezintathu ngokwezixhobo, ipholiyesta yomqhaphu, umqhaphu ococekileyo, kunye nepolyester emsulwa; Iingxowa ze-canvas zahlulwe zangumlenze omnye, igxalaba eliphindwe kabini, kunye neebhegi ngokwendlela yangasemva.
Ingxowa yokuthenga ye-Canvas
Isikhwama se-Canvas tote senziwe ngomqhaphu. Ngenxa yento yayo enobuhlobo kwindalo, ke iindleko zeengxowa ze-canvas zibiza kakhulu kunamalaphu angalukwanga. Siyakuxabisa ukukhusela umhlaba kunye neebhegi zokuthenga ezinokuphinda zisetyenziswe, usenokuthi hayi ephepheni okanye kwiingxowa zeplastiki kwaye ukhusele imeko-bume yomhlaba olikhaya loluntu lonke.
Izinto ezikwingxowa yomqhaphu yicotton ephilayo, kwaye akukho zixhobo zokulungisa, iikhemikhali, okanye amayeza okubulala izitshabalalisi kwiicotton. Ungayithemba ukuba inokuboliswa ziintsholongwane ngoko ke ayizukuhlala kwindawo yokulahla inkunkuma.